Zalisa indawo efihliweyo eWufoo | Martech Zone
Nina bantu niyayazi indlela endikhetha ngayo kubahlobo bamIFomstack njenge umakhi weefom online, kodwa njengearhente, asihlali sisebenza kunye neeapps esizithandayo. Namhlanje, sihambise isicwangciso esiliqili sephepha lokufika kwinkampani esele inayo Wufoo idityaniswe ngokupheleleyo kwinkqubo yabo yolawulo ekhokelayo.
Enye yezinto esoloko siqinisekisa ngayo kukuba siyaqonda ukuba zonke izikhokelo zifunyanwa njani ukuze sikwazi ukusebenzisa uhlahlo-lwabiwo mali olufanelekileyo kwinto nganye kwaye sonyuse isikhokelo ngelixa sigcina iindleko ngokukhokela. Sebenzisa umakhi weefom kwi-Intanethi njengeWufoo, unokucinga ukuba akunakwenzeka ukuseta i umhlaba ofihliweyo kunye nokuchaza kwangaphambili loo ntsimi… Inene ilula.
Yongeza indawo entsha kwaye usete igama eliphambili leCSS ukuba lifihlwe. Oku kuyakuqinisekisa ukuba intsimi ayiboniswanga kwifom nokuba ihanjiswa njani.
Nantsi isampulu enexabiso elingagqibekanga elisekwe ebaleni:
Unokuseta ixabiso lendawo usebenzisa i-URL querystring, nayo, ukulungiselela ixabiso! Ijongeka ngoluhlobo:
Itekhnoloji yokuPhembelela ukukhula koQoqosho eIndiana
Ukubhalela abantu abangaFundiyo